The Gardener: Leave the Office Earlier
Laura Stack ရဲ့ Leave the Office Earlier (ရုံးကနေ စောစောပြန်) စာအုပ်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ခွဲလောက်က ဝယ်ခဲ့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း နည်းနည်းပါးပါးဖတ်ပြီး ချောင်ထိုးထားလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ ရုံးကနေ တစ်ခါတစ်လေ နောက်ကျမှ ပြန်ရတာ ကိစ္စမရှိလှဘူး။ အလုပ်မရှိဘဲနဲ့တော့ နောက်ကျခံပြီးမနေနိုင်ဘူး။ လုပ်စရာရှိတာလည်း အကြွေးမထားဘူး။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Attitude မှန်တာကို သဘောကျတယ်။ workaholics ကို သဘောမကျဘူး။ အဲဒါတွေက စိတ်ရောဂါတွေ။ ဘဝမှာ အလုပ်က တန်ဖိုးထားစရာတွေထဲက တစ်ခုမျှပဲ။ ကျန်တာတွေအများကြီး တန်ဖိုးထားစရာရှိသေးတယ်။ အလုပ်မရှိရင်လည်း ဘဝက တန်ဖိုးရှိနေတာပဲလို့ထင်တယ်။
အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇနီးသည်က လွဲရင် တခြားသူနဲ့ပြောလေ့မရှိဘူး။ အလုပ်အကြောင်း ခိုလိုညည်းပြောတဲ့သူတွေကိုလည်း သဘောမကျဘူး။ အလုပ်အကြောင်းများများပြောတဲ့သူဟာ အလုပ်မနိုင်နင်းတဲ့သူဖြစ်ရင်ဖြစ်၊ တစ်ပါးသူကို မလေးစားတဲ့သူဖြစ်ရင်ဖြစ်၊ ဒီနှစ်ခုမှမဟုတ်ရင်လည်း မကြွားသင့်တာ ကြွားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ အခုခေတ်ကြီးမှာ လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြတာပဲ။ ကိုယ်နဲ့ပြောနေတဲ့တစ်ယောက်က ကိုယ့်အလုပ်အကြောင်း မေးရင်တောင် အကျဉ်းပဲ ပြောသင့်တယ်။ မေးသလောက်ပဲပြော။ ထပ်လေရှည်ရင် အဲဒါ လူကြီးလူကောင်းမဖြစ်သေးတဲ့သဘောပဲ။ ကလေးတုန်းက အထာတွေကို လူကြီးဖြစ်လာရင် မလုပ်သင့်တော့ဘူး။ ဆက်လုပ်နေသေးရင် လူကြီးလူကောင်းဖြစ်မလာတော့ဘူး။
Laura Stack ရဲ့စာအုပ်က အလုပ်ကနေ စောစောပြန် ဆိုလို့ နောက်ကျသွားပြီး စောစောပြန်ခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ Do more in less time - and feel great about it. အလုပ်များများကို အချိန်နည်းနည်းနဲ့ပြီးအောင်လုပ်ပြီး၊ အဲဒီလို effective ဖြစ်တာကို ကျေနပ်ဖို့က အဓိက။
သူ့စာအုပ်မှာ အခန်း ၁၀ ခန်းပါတယ်။
ကို တစ်လုံးစီကို တစ်ခန်းစီ လုပ်ထားတာ။
အခန်း (၁) Mastering the "P" in Productive - PREPARATION
ပထမဆုံး P ကို preparation လို့ သူက ဖွင့်ဆိုတယ်။ အဲဒီမှာ ပေးတဲ့ ဥပမာလေး သိပ်ကောင်းတယ်။ ဂရိ ဒဏ္ဍာရီဇာတ်ကောင် ဟာကျူလီအကြောင်း။ ဟာကျူလီနဲ့ ဟိုက်ဒရာမြွေကြီးတို့ တိုက်ခိုက်တော့ ဟာကျူလီက မြွေကို ခေါင်းဖြတ်လိုက်တိုင်း မြွေခေါင်းက နှစ်ဆပွားပွားလာတာ။ အဲဒီတော့ ဟာကျူလီ့ဆရာ Phil(ဖှေလ်)ကပြောတယ်။ ဟေ့ကောင် မင်း ခေါင်းဖြတ်တာတွေကို မရပ်သေးဘူးလား။ အဲဒီနည်းက အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ တစ်ကောင်ကို သတ်လိုက်ရင် နှစ်ကောင်ဖြစ်ကုန်လို့ မပြီးနိုင်တော့တဲ့ ဘဝမျိုး အလုပ်ခွင်ထဲမှာလည်းရှိလာတယ်။ အဲဒီအခါ Phil ရဲ့ သတိပေးစကားလေးကို ကြားယောင်လိုက်။ အဲဒီနည်းအလုပ်မဖြစ်ဘူး။ မြွေခေါင်းတွေ ထပ်မဖြတ်နဲ့တော့။
ဒီနေရာမှာ ဟာကျူလီသုံးတဲ့နည်းက သာမန်ကိစ္စတွေမှာ မှန်ကန်တဲ့နည်းပဲ။ မြွေတွေ့ရင် ခေါင်းဖြတ်လိုက်ရင် ကိစ္စအေးတာပဲ။ ဒါပေမယ့် Hydra လိုကောင်ကြတော့ ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူး။ သမားရိုးကျနည်းနဲ့မဖြစ်တော့လည်းဖြစ်မယ်။ ပြဿနာ အသစ်ဖြစ်လို့ ပြင်ဆင်မှုအသစ်လိုတယ်လို့လည်း ဆိုချင်ပုံရတယ်။ မြွေခေါင်း နှစ်ဆများလာတိုင်း ခုတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေ အခုခေတ်ရုံးတွေမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း အလုပ်တွေသိပ်များလာရင် အိမ်ကိုလည်း အလုပ်ပါလာမယ်။ ပိတ်ရက်လည်း အလုပ်လုပ်ရမယ်။ မိသားစုဘဝလည်းမရှိတော့ဘူး။ အဲဒါကိုလည်း နည်းလမ်းသစ် မကြံဆဘူးဆိုရင် အဲဒီလူရဲ့ ဘဝဟာ တော်တော်လေး ပိတ်မိနေပြီ။ Phil မရှိရင် ဟာကျူလီလည်း အဲဒီလိုဖြစ်မှာပဲ။
မြွေခေါင်းကို ခုတ်ဖြတ်တာကို မြန်မြန်လုပ်တယ်။ ကြိုးစားပြီး အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်တယ်ဆိုပါတော့။ ကြိုးစားလေလေ အလုပ်ပိလေလေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ တစ်ယောက်တည်းတော်နေရင် ခက်တဲ့အလုပ်တွေကို အဲဒီလိုတော်နေတဲ့သူကို အထက်လူကြီးက ပိုပေးချင်လာတယ်။ စိတ်ချရတဲ့လူ ပိုခိုင်းခံရတာပဲ။ ကျန်တဲ့သူတွေကို အရည်အချင်းတိုးတက်လာဖို့အာရုံမပြုဘဲ ဟာကျူလီတစ်ယောက်တည်း မြွေခေါင်းခုတ်နေရင်တော့ ဟာကျူလီလည်း တစ်နေ့ ဒုက္ခရောက်မှာပဲ။ အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လည်း ဟာကျူလီဆုံးရှုံးသွားရနိုင်တယ်။ အခု သိပ်ခုတ်နေနိုင်တယ်ဆိုပြီး ပျော်နေတဲ့ ဟာကျူလီများရှိရင်လည်း တစ်ချိန်မှာ ခုတ်မနိုင်အောင်ပွားလာတဲ့ မြွေခေါင်းတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲကြိုတွေးထားစေချင်တယ်။
အလုပ်မှာ အချောင်ခိုခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။ productivity ကောင်းဖို့။ အလုပ်က စောစောပြန်နိုင်ပြီး မိသားစုကို အချိန်ပေးနိုင်ဖို့။ work-life balance မျှဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်။ မဟုတ်ရင် ဘဝမှာ အောင်မြင်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူုး။ အလုပ်မှာအောင်မြင်ပြီး ဘဝမှာ ရှုံးနိမ့်တဲ့သူဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ လစာ ၃၀၀ ပိုပေးမယ်၊ တစ်နေ့ တစ်နာရီပိုလုပ်မလားဆိုရင် ကျွန်တော်တော့ မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဘဝမှာ ငွေကြေးနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတာတွေ လုပ်ဖို့ အချိန်လိုသေးတယ်။ ရှေ့ရေးအတွက်လည်း စဉ်းစားဖို့အချိန်လိုသေးတယ်။ လတ်တလော ပိုက်ဆံနည်းနည်းလေးပိုရတာနဲ့ တန်ဖိုးရှိတာတွေ လုပ်ဖို့ အချိန်ကုန်သွားမှာနဲ့ မလဲနိုင်ဘူး။ ဘဝမှာ ငွေကြေးကို သိပ်အာရုံပြုလွန်းရင် ရှင်သန်မှုဟာ ကျဉ်းမြောင်းလာနိုင်တယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကို ပိုက်ဆံပုံပေးပြီးရှာလို့မရဘူး။ သူတို့လိုတဲ့အချိန်မှာ အချိန်ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်။ သာရေး၊နာရေးတွေအတွက်လည်း အချိန်ရှိရမယ်။ အချိန်ရှိဖို့ဆိုတာကလည်း ရုံးအလုပ်တွေက ရုံးမှာလုပ်ရင် ပြီးသင့်တယ်။ တစ်လတစ်ခါလောက် အလုပ်များတာက ပြဿနာမရှိပေမယ့် တစ်လမှာ တစ်လလုံး late night လုပ်ရပြီး weekends မှာပါ အလုပ်လုပ်နေရရင် ဘဝဟာ တော်တော်ကျဉ်းမြောင်းနေပြီ။ ကိုယ်က သိပ္ပံပညာရှင်ဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာလောကကြီးကောင်းစားဖို့ ကိုယ် အနစ်နာခံလိုက်တယ်ဆိုရင် တစ်မျိုးသင့်တော်သေးတယ်။ ပုဂ္ဂလိက အကျိုးစီးပွားအတွက်တော့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးနဲ့ မိသားစုဘဝကို ပုံအောလိုက်ဖို့ မသင့်ဘူး။
အလုပ်ကို အချိန်မှန်လာပြီး အချိန်မှန်ပြန်တာ ဘာမှပြဿနာမရှိရဘူး။ တစ်ချို့ရုံးတွေ စောစောပြန်ရင်ကို ပျင်းတယ်ထင်တာရှိတယ်။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်ပြီးအောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ပြီးရင် စောစောသာပြန်သင့်တယ်။ ၉ နာရီကနေ ၆ နာရီလုပ်ရတဲ့အလုပ်ဆိုရင် ၉ ခွဲရောက်ရင် ၆ ခွဲလောက်ပြန်မယ်။ အချိန်ကို မခိုကပ်ဘူး။ အလုပ်များရင် များသလို ထမင်းစားချိန် နည်းနည်းလျှော့ပြီး မြန်မြန်ပြန်လုပ်ပေးသင့် လုပ်ပေးလိုက်မယ်။ အချိန်မှန်ပြန်တာဟာ နောက်တစ်နေ့အတွက် အင်ပြည့်အားပြည့်နဲ့ပြန်လာနိုင်ဖို့ပဲ။
ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာ နည်းလမ်းမှားနေ၊ လွဲနေလို့ ကြာတာဆိုရင် အဲဒီအပိုင်းကို ပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားသင့်တယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဆီကနေ သင်ယူလို့ရတာတွေရှိတယ်။ စာအုပ်တွေဆီကနေ သင်နိုင်တယ်။ online ကနေ ပိုပြီး effective ဖြစ်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှာနိုင်တယ်။ တစ်ချို့အလုပ်တွေက tedious သက်သက်ပဲ။ ခက်တာမဟုတ်ဘဲ repititive ဖြစ်နေတာမျိုး။ အဲဒါတွေကို delegate လုပ်ပစ်ရမယ်။ ကိုယ်က ၁၀၀ တန်တာလုပ်နိုင်တဲ့သူဆိုရင် ဆယ်ပြားတန်တွေမှာ အချိန်သိပ်မသုံးနဲ့။ automate လုပ်လို့ရတာတွေရှိမယ်။ ကိုယ့်ကို ကူညီပေးနိုင်မယ့် လက်အောက်ငယ်သားတွေရှိမယ်။ သူတို့ကိုလည်း ကူခိုင်းရမယ်။ တစ်ယောက်တည်း အားလုံးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူဟာ ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာတဲ့သူပဲ။ တခြားသူကို မယုံကြည်ရင် ခေါင်းဆောင်ကောင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီလို လိုအပ်တဲ့ နည်းလမ်းကို ရှာနိုင်ရင် ရေရှည်အဆင်ပြေမယ့် အဖြေကို တွေ့နိုင်တယ်။
သဘောထားမှန်ဖို့က အခက်ဆုံးပဲလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင် သဘောထားမှန်ရင် အလုပ်မှာလည်း ပျော်တယ်။ အများနဲ့လုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ရှည်တယ်။ ကိုယ့်နေရာနဲ့ ကိုယ့်အတိုင်းအတာကို သိမှ productive ဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲယူနိုင်မယ်။ လူတွေကို နားဝင်အောင်မပြာနိုင်သေးဘူးဆိုရင် ကိုယ့်မှာ အဲဒီစွမ်းရည်ချို့တဲ့နေတယ်။ ဖြည့်ဆည်းရမယ်။ ဘယ်လောက်ပြောပြော မလုပ်ချင်တဲ့သူ၊ အချောင်ခိုချင်တဲ့သူကတော့ ရှိဦးမှာပဲ။ အဲဒီပြဿနာတွေကိုလည်း အလုပ်ဖြစ်အောင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာပဲ။
ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရတော့ effective ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ၊ မလိုတာတွေကို လျှော့ပြီး လိုတာတွေကို အာရုံပိုစိုက်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်။ ရုံးတစ်ရုံးမှာ အင်မတန်နှေးတဲ့ စက်တွေနဲ့ အင်မတန်ကြိုးစားတဲ့ အလုပ်သမားတွေရှိတယ်ဆိုပါတော့ စက်ကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုအဟန့်အတားဖြစ်နေတာကို လူတွေဖိကြိမ်းနေလို့မဖြစ်ဘူး။ စက်ကို လဲပေးရမယ်။ မလဲနိုင်ဘူးဆိုရင် စက်ရဲ့ အကန့်သတ်ကိုနားလည်ရမယ်။ တစ်ချို့လူတွေမှာ အလုပ်မှာ သိရ၊တတ်ရမယ့် ပညာတစ်ချို့ ချို့တဲ့နေတယ်။ မတတ်သေးဘူးဆိုပါတော့။ အဲဒီလူတွေကို စုပြီး training ပေးသင့်ပေးရမယ်။ လုပ်ပုံကိုင်ပုံစနစ်မကျရင် သူတို့ လိုက်နာနိုင်မယ့် စနစ်တစ်ခုလုပ်ပေးရမယ်။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေအတွက် အမြဲတမ်း reference လုပ်ဖို့ work-flow ပေးထားရမယ်။ လူတိုင်းဟာ သူတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်သိဖို့လိုတယ်။ အလုပ် A အတွက် ခေါ်ထားတဲ့သူက အရင်အလုပ်မှာ အလုပ် B လုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအလုပ်မှာ B မလိုဘူး။ A အတွက်ပဲလုပ်ရမှာကို မလုပ်ဘူးဆိုရင် အဲဒီလူဟာ productive မဖြစ်ဘူး။ တစ်ချို့ သိပ်တော်တဲ့ သူတွေ Management ကိုပြောင်းတော့မှ လူရှော်တွေဖြစ်ကုန်တာ အဲဒီသဘောပဲ။ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းပြောင်းသွားတာကို မသိဘဲ ဟာကျူလီ မြွေခေါင်းဖြတ်သလို စွတ်ရွတ်လုပ်နေတာနဲ့ အထက်ရော၊အောက်ကပါ မကျေမလည်ဖြစ်ကြတယ်။
ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်။ အရည်အချင်းသစ်တွေလိုရင် အဲဒါတွေကို ဖြည့်ဆည်းထားဖို့လိုတယ်။ ဆေးပညာမှာဆိုရင်လည်း ရှေးသမားတော်ကြီးတွေ အခုခေတ်ပေါ်နည်းမသုံးဘဲ ရှေးနည်းမှ အကောင်းလုပ်နေတာတွေက အသစ်ကို မျက်ခြေပြတ်သွားတဲ့သဘောပဲ။ အပြောင်းအလဲအသစ်၊ နည်းပညာ အသစ်အတွက် ပြင်ဆင်မှုမရှိတဲ့သဘောပဲ။ အလုပ်တွေသိပ်များလာရင်၊ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ နည်းလမ်းတွေက အံမဝင်တော့ဘူးဆိုတာ နည်းနည်းပါးပါး သံသယဝင်လာရင် အဲဒါလေးကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ လူဆိုတာ ကိုယ့်အားနည်းချက် ကိုယ်မြင်ဖို့သိပ်ခက်ပါတယ်။ လူများမှားတာသာ ဒက်ခနဲမြင်တာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ ဝေဖန်ရေးလုပ်ရမှာ တော်တော်လေးအားနာပုံရတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Phil က ဟာကျူလီကိုပြောတာလေးကို မကြာမကြာသတိရပေးကြပါ။ " Will you forget the head-slicing thing?" It's not working.
[ဖတ်လက်စ စာအုပ်ကို ဆင့်ပွားပြီးရေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေတာရှိရင်လည်းယူကြပါ။ မပြေတာရှိရင်လည်း ကျော်ဖတ်လိုက်ပါ။ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေအဖို့တော့ ဒါလေးတွေ သိရရင် တန်ဖိုးရှိမယ်ထင်တာနဲ့ရေးလိုက်ပါတယ်။]